विश्व सेयर बजारमा गिरावट कहिलेसम्म ? आर्थिक संकटको खतरा ! - NepalKhoj
नेपालखोज २०७९ असार ९ गते १३:१४
काठमाडौं । ‘डाउ जोन्स’ र ‘एसएन्डपी ५००’ विश्वभरिका अर्थ व्यवस्थाको जानकारी दिने अमेरिकी सूचकांक हो । यो सूचकांक पछिल्लो ६ महिनाको रेकर्डको स्तरबाट क्रमशः १५, २० प्रतिशतले घट्दै गइरहेको छ ।
सन् २०२० मा कोरोना महामारी सुरु भएको समयभन्दा पनि सेयर बजारको स्तर आजभोलि खस्किएको छ । यद्यपि सेयर बजार कहिलेकाहीँ केही समय घट्ने गर्छ जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘सुधार हुनु’ पनि भनिन्छ । सेयर बजारमा अब गिरावटको अवस्था सिर्जना विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् ।
सेयर बजारमा मन्दी भएको समय त्यस बेलालाई मानिन्छ, जतिबेला सेयरको रकम अहिलेको रकमभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न थाल्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, जब लगानीकर्ताले एक अवधिमा आफूले खरिद गरेको भन्दा बढी सेयर बिक्री गर्दा बजारको दिशा निर्देशन गर्ने कम्पनीहरूको पुँजीकरण घट्यो भने सेयर बजारमा मन्दी आएको मानिन्छ ।
मन्दी कहिलेसम्म रहन्छ ?
‘एसएन्डपी ५००’ सूचकांक १९२९ देखि २६ पटक मन्दीको चपेटामा परेको छ । तर, सन् १९२९ को आर्थिक मन्दीका कारण उत्पन्न अस्थिरताका कारण सन् १९५० सम्ममा १४ पटक यस्तो गिरावट आएको थियो । तर त्यसपछिको ७२ वर्षमा १२ पटकसम्म गिरावटको अवस्था आएको छ ।
जे होस्, पछिल्ला केही वर्षहरूमा, बजारमा मन्दी उल्लेखनीय रूपमा कम भएको छ । आर्थिक संकट वा मन्दी आउन लागेको वा सुरु भइसकेको अवस्थामा मात्रै यस्तो हुन्छ ।
सन् १९७० को दशकमा तेल संकटको बेला ‘एसएन्डपी ५००’ सूचकांकमा ठूलो गिरावट भएको थियो । नोभेम्बर १९७३ देखि १९७४ सम्मको तीन महिनामा सूचकांक ४८.२ प्रतिशतले झरेको थियो । त्यसपछि अक्टोबर २००७ देखि नोभेम्बर २००८ को बीचमा २००८ को आर्थिक मन्दीको ठीक अघि सूचकांकले करिब ५२ प्रतिशतको ठूलो गिरावटको रेकर्ड कायम गरेको थियो ।
दुई वर्षअघि, फेब्रुअरी र मार्च २०२० बीचको एक महिनामा सूचकांक ३३ प्रतिशतले घटेको थियो । कोरोना महामारी चल्दै गर्दा आर्थिक मन्दी आउने डरले पनि गिरावटको अवस्था भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
अहिलेसम्म मन्दीको चपेटामा परेको बजारको अध्ययनले बताउँछ कि एसएन्डपी ५०० को गिरावट औसत २८९ दिनसम्म चलेको छ । अर्कोतर्फ, गिरावटको तथ्यांक हेर्दा परिसूचक त्यतिबेलाको उच्चस्तरबाट औसत ३६ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ ।
गिरावट कति समयसम्म रहन्छ त ?
बजारमा गतिको समय ९९१ दिन अर्थात् करिब पौने तीन वर्ष छ । औसत मुनाफा ११४ प्रतिशतसम्म भएको छ । मन्दीको बजार लामो समयसम्म रहिरन्छ । बजारमा उच्छल आउँदा त्यसबाट हुने नाफा पनि मन्दीमा हुने घाटाभन्दा धेरै हुन्छ ।
लामो समयसम्म अर्थ व्यवस्थाको विस्तार भइरहँदा मन्दीमा हुने घाटाभन्दा धेरै हुने विज्ञ बताउँछन् । यसको परिणाम स्वरूप तीव्र रूपमा बजार बढ्छ र त्यसपछि केही समयपछि गिरावट आउँछ । फेरि बजार गिरावटको गतिमा जान्छ । -बीबीसी